isukeenidda qoyska - USA keena Ehelkiinna | USAHello | USAHello
Waxaa jira dhowr siyaabood oo kala duwan oo aad ka codsan kartaa in ay leeyihiin xubnaha qoyskaaga yimaadaan si ay Maraykanka in aad ku biiri ka dib markii laguu soo dejin. Tan waxaa lagu magacaabaa isukeenidda qoyska.
Sawirka Michael Swan, CC.
Sidee shaqo isukeenidda qoyska?
Haddii aad soo gashay Mareykanka adigoo ah qaxooti ee la soo dhaafay gudahood 2 sano ama ka ayaa la siiyey heer asylee ee la soo dhaafay gudahood 2 sano, waxaad codsan kartaa xubnaha qoyska qaarkood si aad u hesho "derivative" qaxooti ama asylee status. Taas macnaheedu waa in ay noqon karaan qaxootiga ah ee USA maxaa yeelay, waxay qayb ka mid ah qoyskaaga. xubnaha qoyska qaarkood oo keliya ay noqon karaan qaxootiga "derivative": xaaskaaga (seygaaga ama xaaskaaga) ama caruurtaada (guursan oo ka yar 21 marka ugu horeysa ee aad codsatay magangelyo ama qaxootiga status).
Waxa kale oo aad codsan kartaa in ay leeyihiin xubnaha qoyska kuwaas oo horey u aqoonsaday in ay yihiin qaxooti aad ku biiri ee USA.
Haddii aadan u qalmin mid ka mid ah barnaamijyada kuwa oo haatan tahay muwaadin Mareykan ah, waxa kale oo aad ku buuxin kartaa arjiga si joogto ah u leedahay in qoyska socdaalo si USA.
Yaa u qalma in ay codsadaan isukeenidda qoyska?
Si loo codsado in ay xaaskaaga ama caruurta aad ku biiri ee USA hoostiisa Barnaamijka mideynta qoyska, waa in aad la waxa loo yaqaano a “maamulaha” qaxooti ama asylee. Taas macnaheedu waa in aad ahaayeen qofka helay xaaladda rasmiga ah ee qaxootiga iyo u yimaadeen inay USA Xafiiska US ee dejinta. Waa in aad soo gashay Mareykanka adigoo ah qaxooti ee la soo dhaafay gudahood 2 sano ama lagu siiyay magangelyo ee la soo dhaafay gudahood 2 sano. Waa in aad ku sii qaxootiga ama asylee status ama u noqday deganaanshaha joogtada ah xalaal (kaarka cagaaran).
Affadavit Barnaamijka Xiriirka
Waxaa kaloo laga yaabaa inaad xaq u leedahay inaad ku xereyso Dhaarta ah ee Xiriirka ah xaaskaaga, ilmahaaga (guursan, under 21), ama waalidka. Dhaarta ee Xiriirka waa qaabka loo isticmaalaa in lagu mideeyo qaxootiga iyo magangelyo doone waa qaraabo dhow kuwaas oo horay go'an in qaxootiga noqon laakiin waa meel ka baxsan Maraykanka. Dhaarta ee Xiriirka diiwaan macluumaad ku saabsan xiriirka qoyska. Dhaarta The waa in la buuxiyaa si ay u bilowdo hawsha arjiga qaraabada xaqa u yeelan kara inay soo galaan Maraykanka qaxooti ahaan iyada oo loo marayo Barnaamijka Admissions Refugee Maraykanka. Waa inaad buuxisaa codsiga this muddo shan sano gudahood markaad timaado USA. Wixii macluumaad ah oo ku saabsan dalal hadda xaq u leedahay inaad fayl, aragto US Department of State, Bureau of Population, Qaxootiga & socdaalka.
Petition for qaraabo shisheeye
Qaxootiga la Deganaanshaha Joogtada xaaladda Alien ama kuwaas oo Maraykanka ka badan shan sano ka dalban kartaa oo ku hadlaya magaca xaaska, carruurta, waalidiinta, iyo walaalaha la isticmaalayo Foomka I-130. Marxaladani waxay qaadan kartaa waqti dheeraad ah oo noqon way ka adag tahay kor ku xusan laba barnaamij. Fadlan akhri USCIS Family of US Citizens page wixii macluumaad dheeraad ah.
Waxaa sidoo kale jira barnaamij gaar ah ee xubnaha qoyska oo Iiraaniyiin ah la kulma cadaadis diimeed.
Waa kuwee xubnaha qoyska waxay xaq u leeyihiin inay u yimaadaan USA?
xiriirka qoyska uu lahaa si uu u jiro ka hor inta aadan u yimid inuu Maraykanka qaxooti ama lagu siiyo magangelyo. Taas macnaheedu waxa weeye:
Haddii aad rabto in aad buuxiso waraaqaha u leedahay in aad xaaskaaga u yimid inuu Maraykanka, waxaad lahaa in la guursaday ka hor aad timid Mareykanka adigoo ah qaxooti ama lagu siiyo magangelyo Maraykanka. Fadlan booqo USCIS Qaxootiga & Xaaska Asylee page wixii macluumaad dheeraad ah.
Ilmahaagu lahaa in la uuraysatay (Tan waxaa looga jeedaa hooyada horey u ahaa uurka leh) ama ku dhashay ka hor inta aadan soo galay qaxooti ama lagu siiyo magangelyo. Fadlan booqo USCIS Qaxootiga & Carruurta Asylee page wixii macluumaad dheeraad ah.
Waxaad weli ku jira qaxooti ama asylee status ama u noqday dagane joogto ah (kaarka cagaaran). Haddii aad horay u noqdaan laga xoreeyo dalka ah. Muwaadin dhex waddaniyaynta, ma waxaad codsan kartaa si aad u hesho qaxootiga derivative status ama asylee qof qaraabo ah. Si kastaba ha ahaatee, weli waxaa laga yaabaa inaad si ay u caawiyaan soo socdaalo qoyska Maraykanka.
Under Dhaarta barnaamijka Xiriirka, waxaad codsan kartaa carruurtaada, xaaska, ama waalidka inuu yimaado Maraykanka.
Sidee baan u codsadaa isu keenida qoyska?
Si aad u dalbato xaaskaaga ama caruurta in ay yimaadaan Maraykanka qaxooti, waa inaad buuxisaa Foomka I-730, ama Refugee / Asylee Petition Qaraabo. Foomkan waxaa si xor ah u soo gudbin. Waxaad haysan doontaa in ay ka mid dhowr dokumentiyo sharci oo muhiim ah marka aad codsaneyso. Marka aad download Form I-730, hubi in sidoo kale akhri macluumaadka rasmiga ah USCIS Form I-730 iyo tilmaamaha xereynta Foomka I-730.
Buuxinta foomamka sharciga ah wuxuu noqon karaa mid aad u adag. Caawimaad weydiiso hay'adda dejinta ama ka heli a garyaqaan ama urur sharci ah oo caawiya muhaajiriinta. dheeraad ah oo ku saabsan keenista Baro dhowr luqadood iyada oo loo marayo IRAP.
class imtixaanka dhalashada Free US
Macluumaadka on this page ka timaadaa US Department of State, USCIS, oo kale ku kalsoon tahay ilaha. Waxaa loogu talagalay hanuun iyo waa la cusboonaysiiyaa inta badan ee suurtogalka. USAHello ma siiyo talo sharci ah, mana ka mid ah waxyaabaha aannu loogu tala galay in la qaado, sida la-talin sharci. Haddii aad raadineyso qareen lacag la'aan ah ama qiime jaban ah ama caawimaad sharci, waxaan kaa caawin karnaa hesho adeegyada sharci oo bilaash ah iyo qiimo-yar.